श्रीपशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरुन, बैशाख ८ गते शनिबार अप्रिल २१ को राशिफल « Pana Khabar
श्रीपशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरुन, बैशाख ८ गते शनिबार अप्रिल २१ को राशिफल
प्रकाशित मिति : Apr 21, 2018
समय : 12:25 am
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल बैशाख ८ गते शनिबार इश्वी सन २०१८ अप्रिल २१ तारीख बैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथी चन्द्रमा मिथुन राशिमा सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु छन्ददिवस – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
बलतथा प्रराक्रममा बृद्धिहुने योग रहेकोछ । दाजुभाई तथा ईष्ट मित्र बिचको सम्बन्धमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ । कुराकाट्ने ब्यक्ति हरुबाट भने सजग रहनु होला ।
बाणिका कारण आफन्त जनहरु रुष्ट रहनेछन । पठनपाठनमा राम्रो समय रहेको छ । भोजभतेरमा सरीक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ । खराब संगतका कारण कार्य क्षेत्रमा साधारण अपजस आईपर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
शारिरीक आलस्यताले कार्य सम्पादनमा झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । यात्रा खर्च दायक रहनसक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
बिद्या प्राप्ति योग तथा बौधिक बिकाश हुने समय रहेकोछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पारीवरिक शुःख प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
दाजु भाई तथा मित्रजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । यात्राकारक दिन रहेकोछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला । अपरीपक्क निर्णयले तपाई लाई गलत साबित गर्न सक्नेछ ।
खानपान मा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको काम को क्षेत्रमा अप्जस सहनु पर्ला ।
तपाईका शुभ चिन्तक हरुको सङख्या बढ्नेछ भने शत्रुपक्क्ष कमजोर हुनाले बिघ्नबाधाहरु हट्नेछन् । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला । जिद्दी स्वभावको कारण प्रतिश्पर्धामा पराजयको सामना गर्नुपर्नेछ ।
पारीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मद्दत पूग्नेछ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित रहला ।
आज घटस्थापना,दशैँको पहिलो दिन
अाज विश्वकर्मा पूजा, वास्तु दिवस
आज बाबुको मुख हेर्ने दिन, गोकर्णेश्वरमा पिण्डदान गर्नेको भीड
कुशे औँशीः कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास, पितृ सम्मान दिवस पनि